I-TurnTo: Ukubuyekezwa kwe-Syndicate nabaHoli boMkhiqizo Wakho | Martech Zone
NgoLwesihlanu, ngoJuni 9, i-2017 NgoLwesihlanu, ngoJuni 9, i-2017 Douglas Karr
Ukuthengiselana kuyindlela ephumelela kakhulu kubathengisi abakwi-inthanethi ukukhuphula ngokushesha ivolumu yezilinganiso zomkhiqizo nezibuyekezo (izibuyekezo) abazibonisayo. Amabhrend, imvamisa kuqala ukuqoqa lokhu okuqukethwe okubalulekile okwenziwe ngumsebenzisi (UGC), balangazelela abathengisi ukuthi bakufake kumasayithi abo e-eCommerce. Ngokwabelana ngokubuyekezwa kwabo nabalingani babo bokusabalalisa, imikhiqizo ingasiza imikhiqizo ukuthi ivelele futhi ithengise kangcono, njengoba amanani aphezulu wokubuyekeza efakazelwe ukuthi akhulisa ukuthengisa.
Kuze kube manje, ukuhlangana okunjalo bekwenzeka kuphela ngokusebenzisa Ivaliwe amanethiwekhi. Inkinga ukuthi, le ndlela idinga ukuthi bobabili imikhiqizo inikeze izibuyekezo futhi abathengisi ababatholayo basebenzise ipulatifomu efanayo futhi babe nesivumelwano esisemthethweni sokushintshana ngokuqukethwe. Labo abasebenzisa amanye amapulatifomu bavinjelwe ngaphandle kokushintshaniswa, futhi imikhiqizo engaphakathi kwenethiwekhi ikhokhiswa imali eshisiwe ngumhlinzeki wabo wesikhulumi wokufinyelela kwenethiwekhi.
Ukuhlanganiswa kokubuyekezwa kwamanethiwekhi we-TurnTo
I-TurnTo Networks ingumhlinzeki wezixazululo zokuqukethwe kwamakhasimende esizukulwane esilandelayo zabathengisi abaphambili nemikhiqizo. Nge-suite eyingqayizivele yemikhiqizo emine emisha:
I-Q & A Yomphakathi
I-TurnTo ihambisa okuqukethwe ngomsebenzi omncane, iqinisekisa ubuqiniso obukhulu, ukuphakama kokuguqulwa, ukwenziwa kwe-injini yokusesha (i-SEO) kanye nokuqonda kokuthengisa. Ukusiza amakhasimende ukunqoba inselelo yomkhakha wesikhathi eside, i-TurnTo muva nje yethule inethiwekhi evulekile. Vula Ukuthengiswa Kwesibuyekezo kwandisa ngokumangazayo ukwabelana ngokuqukethwe, kusiza ivolumu yokubuyekeza enkudlwana, nokusika “imali yokufinyelela” eweni ekhokhiswa ngamanethiwekhi avaliwe ngokwesiko.
With Vula Ukuthengiswa Kwesibuyekezo, noma imuphi umkhiqizo manje usunganikeza izibuyekezo kubathengisi nge-TurnTo's Customer Content Suite, noma ngabe basebenzisa yiphi ipulatifomu yokuqoqa nokuphatha. Akukho kuhlanganiswa kobuchwepheshe okudingekayo, futhi imikhiqizo ingaba nokubuyekezwa okungezwe kunethiwekhi ye-TurnTo futhi kuboniswe kumasayithi e-eCommerce ozakwethu kungakapheli usuku noma ezimbili.
Abathengisi babuka futhi baphathe okuqukethwe okuhlanganisiwe kusuka ngaphakathi kwedeshibhodi ye-TurnTo ukuthola ukulawula okuphelele kanye nokubika imininingwane. I-TurnTo futhi inikeza API ukufinyelela ukuze abathengisi abasebenzisa amanye amapulatifomu - amasistimu ejwayele ukwakhiwa ekhaya - angazuza ekuhlanganisweni kokubuyekezwa komkhiqizo okokuqala ngqa.
Amanethiwekhi wokuthengisa avaliwe awenzi mqondo. Kufana nesitolo sokudla okuqasha othile ukusetha izibonisi zabo zokuphela kwendlela, ngumuntu kuphela othengisa leyo ndawo yeshalofu le-premium ezinkampanini zesoda futhi afake imali. I-TurnTo's Open Review Syndication yakhelwe ngakwimodeli ehlukile. Okuqukethwe kungokwamikhiqizo - kufanele bakwazi ukuyabelana ngakho ukusiza abathengisi babo. Inethiwekhi ingeyabathengisi - kufanele bakwazi ukubonisa izibuyekezo kusuka kunoma imuphi umkhiqizo ofuna ukuwabelana ngawo. Umsebenzi wethu ukwenza kube lula ukuthi bobabili basebenze ngokubambisana. UGeorge Eberstadt, isikhulu esiphezulu se-TurnTo
I-CPO Commerce, ethengisa amathuluzi kagesi avela kuyo yonke imikhiqizo emikhulu, ishintshele ku-TurnTo's Open Review Syndication futhi yazuza izinzuzo ezinamandla. Phambilini, umthengisi ubesebenzisa inethiwekhi evaliwe, futhi ngenxa yokuthi iningi lemikhiqizo nabakhiqizi abathengiswa yi-CPO bebengekho enkundleni ye-in-network, baphuthelwa ukuhlanganiswa kwezibuyekezo ezingaba khona, abathengisi abadumazayo abafisa ukubamba iqhaza kepha abakwazanga .
Ngobuchwepheshe be-TurnTo, i-CPO iphindaphindeke kabili inani lemikhiqizo lapho ithole khona okuqukethwe okuhlanganisiwe ngenkathi inyusa inani eliphelele lezibuyekezo ezikhonjiswe ngu amaphesenti angaphezu kwe-250.
Funda Kabanzi Mayelana ne-TurnTo Open Review Syndication
Tags: BOSEI-CPOCPO Commerceukuvula ukubambisana kokubuyekezaukubuyekezwa komkhiqizoIzibuyekezoukubuyekezwa okuhlanganisiweJikela ku